राजेश मिश्र, मंसिर २५, २०७४
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सोमबार बिहान ७:३० बजेसम्म परिणाम आएका १ सय २५ स्थानमध्ये वाम गठबन्धनले १ सय ११ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले ७२ र माओवादी केन्द्रले २९ स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।
दोब्बर बढीको रोचक जित
ओलीलाई सर्वाधिक मत
-दुर्गा खनाल, मंसिर २५, २०७४
प्रतिस्पर्धामा जित र हार हुन्छ नै । तर जित र हारबीचको अन्तर जब अत्यन्त बढी वा कम हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बन्छ, अनि परिणाम ऐतिहासिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यो निर्वाचनमा केही उम्मेदवारले यति धेरै अन्तरमा विजय हासिल गरेका छन् कि जुन अंक हेर्दा त्यहाँ एक्लै चुनाव लडेको हो कि अन्य प्रतिस्पर्धी पनि थिए ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
तनहुँ–१ बाट पराजित कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई विजय जुलुसमै पुगेर बधाई दिँदै । तस्बिर : कान्तिपुर
कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं, मंसिर २५, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा जित्नेहरू मात्र हैन, केही पराजित समेत चर्चामा आए । पराजयपछिको चर्चाको केन्द्रमा सबैभन्दा अघि थिए, झापा– १ का कांग्रेस उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्मा ।
उनले लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार डा. गोविन्दराज पोख्रेललाई फराकिलो मतअन्तरले हराउँदै जित हात पारिन् । पौडेलले ४७ हजार पाँच सय १४ मत पाएकी छन् ।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार बिना मगर निर्वाचित भएकी छन् । उनले ३८ हजार ४ सय ६७ मत पाएकी छन् ।
पूर्वी नवलपरासीको सबै क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । पूर्वी नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेस नेता सशांक कोइराला विजयी भएका छन् । उनले ३७ हजार ३ सय ७३ मत पाए ।
अशोक राईलाई हराउँदै सुनसरी १ मा एमाले उम्मेदवार विजयी
सुनसरी १ नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार जयकुमार राई दोब्बर मतले निर्वाचित बनेका छन् । उनले २२ हजार ४ सय ५ मत अन्तरले संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राईलाई हराएका छन् ।
भक्तपुर २ मा एमालेले इतिहास रच्यो
लीला श्रेष्ठ, मंसिर २४, २०७४
निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा एमालेले इतिहास रच्दै प्रतिनिधिसभा तथा दुवै प्रदेशसभा सिटमा विजयी भएको छ । २०४८ पछि तीनपल्ट कांग्रेस र दुईपल्ट नेमकिपाले पालैपालो जितेको क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतले जितेका हुन् ।
अधिकांश वरिष्ठ नेताहरूले पराजय भोगिरहेका बेला कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०४८ देखिको आफ्नो किल्ला जोगाउन सफल भएका छन् । ७२ वर्षीय देउवाले २८ हजार ४४ मतसहित अपराजित यात्रा कायम राखे । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा छैटौं पटक जित हात पारेका उनले माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य खगराज भट्टलाई ६ हजार ९ सय २९ मतान्तरले हराए । भट्टले २१ हजार एक सय १५ मत पाएका थिए ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू हारे पनि गठबन्धनले जितेकामा खुशी व्यक्त गर्दै काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
ठाकुरसिंह थारू, मंसिर २४, २०७४
कांग्रेसको ऐतिहासिक क्षेत्र मानिने बाँकेको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका इस्तियाक राई विजयी भएका छन् । उनले वाम र लोकतान्त्रिक दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पछि पारे ।
सात बजेसम्मको मत परिणाममा एमाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा विजयी
नेपाल मेडिकल हब बन्न सक्छ : ओली
सिरहा ३ मा एमालेका श्रेष्ठ विजयी
स्याङ्जामा दलहरुबीच विवाद चुलियो, मतगणना अन्योलमा
रामेछापमा सबै वाम
सुर्खेत १ प्रदेश (क) मा माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्ट विजयी
डोटीको प्रदेश सभा 'क' भरतबहादुर खड्का विजयी
२८ हजार मतान्तरले एमाले अध्यक्ष ओली विजयी
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर २०, २०७४
यसरी भयो चपलीहाइट बिष्फोट (भिडियो)
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर १८, २०७४
विद्या राई, मंसिर १७, २०७४
दुईसय बर्ष पुरानो टक्सार बजार
मतदाता शिक्षा स्थानीय भाषामा
मकर श्रेष्ठ, मंसिर १३, २०७४
पाहुना चराले मनमोहक जगदीशपुर ताल
मनोज पौडेल, मंसिर ११, २०७४
मतदाताको रोजाइ, प्राथमिकता र सन्देश
कृष्ण खनाल, मंसिर २४, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणाम हेर्दा वाम गठबन्धनका रूपमा चर्चित नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादीकेन्द्र) को संयुक्त गठबन्धन प्रदेश–२ बाहेक सबै प्रदेश र संघीय संसद्मा सुविधाजनक बहुमततर्फ लम्केको छ । पूरा पढ्नुहोस्
सुधीर शर्मा, मंसिर २४, २०७४
दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु ठीक अघि गत शनिबार बिहान कान्तिपुरले तीन शीर्ष नेताको अन्तर्वार्ता लिएको थियो एकै समय– धनगढी, दमक र काठमाडौंमा । अन्तर्वार्ताका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको ‘सकभर बहुमत आउने’ बताएका थिए । ‘सकभर’ भन्नुको अर्थ उनी स्वयं अनिश्चित थिए भन्ने जनाउँथ्यो । आखिर नेतृत्व नै धुकचुकमा छँदा समग्र पार्टीले चुनावी–अक्सिजन पाएन । पूरा पढ्नुहोस्
कृष्ण पहाडी, मंसिर २४, २०७४
सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यही दिन अर्थात् १० डिसेम्बरलाई मानव अधिकार दिवसका रूपमा विश्वभरि मनाइन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
जनादेश : २०७४
सम्पादकीय, मंसिर २४, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली दुवैको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन अझै केही दिन लाग्नेछ तर अहिले सार्वजनिक भइरहेको मतपरिणामको प्रवृत्तिले भने केन्द्र र अधिकांश प्रदेशमा एमाले–माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउने देखाएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
चुनावमा छेलिएका मुद्दा
युग पाठक, मंसिर २३, २०७४
उल्लास र त्रासको बीचबाट निर्वाचन सम्पन्न भयो । अबका केही दिन जित्नेको हर्षबढाइँ र हार्नेको विस्मातका बीचबाट मुलुकको राजनीति अघि बढ्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । चुनाव हुनुलाई नै संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य ठान्नेका लागि मुलुक अब निर्वाध आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्नेछ । पूरा पढ्नुहोस्
स्कुल नगई–नगई जाँडको व्यापार
विद्या राई, मंसिर २३, २०७४
दक्षिणी भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–९ की रमिता राई १० वर्षकी भइन् । दुई दाजु र तीन दिदी–बहिनीमध्ये कान्छी उनी ४ कक्षामा पढ्छिन् । तर प्राय: विद्यालय जाँदिनन् । रमिता धेरैजसो छिमेकी जिल्ला उदयपुरसँग जोडिएका दूधकोशी र आमचोक गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने एखावा खोलाको दोभानमा भेटिन्छिन् । यहाँ उनका बुबा–आमा जाँड व्यापार गर्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
सबैको शत्रु भ्रष्टाचार
केदार खड्का, मंसिर २३, २०७४
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००३ मा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पारित गरेको दिनलाई विश्व दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । यो महासन्धिमा १८३ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन् भने १४० मुलुकले अनुमोदन गर्नुका अतिरिक्त भ्रष्टाचार विरुद्ध ७ सन्देश प्रवाह गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
रिपोर्टरको डायरी : नेताको दम्भ
अखण्ड भण्डारी, मंसिर २३, २०७४
प्रदेश २ को सवा–महिने रिपोर्टिङ यात्रामा निस्कनुअघि मैले चर्चामा रहेका केही प्रतिस्पर्धालाई समेट्ने सूचीमा राखेको थिएँ । यो प्रदेशका समानतामूलक केही रोचक विशेषता थिए– केवल मधेस, सबै निर्वाचन दोस्रो चरणमा, हरेक जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका ४/४ क्षेत्र । पूरा पढ्नुहोस्
आश गुरुङ, मंसिर २०, २०७४
रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका एक युवकको निधन भएको छ । लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका ११, रामचोक बेंसीसहरका २५ वर्षीय रवीन श्रेष्ठको निधन भएको परिवारले जनाएको छ ।
एकमहिने सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया आएको नेपाल आइडलको टोलीलाई यहाँका संगीतप्रेमीले राम्रो साथ दिएका छन् । अस्ट्रेलियाका आठ सहरमा गाउने सांगीतिक प्रस्तुति लिएर केही दिनअघि सिड्नी आइपुगेको टोलीमा नेपाल आइडल विजेता बुद्ध लामा, फस्ट रनरअप निशान्त भट्टराई, सेकेन्ड रनरअप प्रताप दास र प्रमिला राई छन् ।
अस्ट्रेलियामा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर १६, २०७४
नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र अस्ट्रेलियामा रहेका विदेशीहरुलाई नेपालको भ्रमण गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले दक्षिण अस्ट्रेलियामा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
गम्भीरलाई कोरियामा मानार्थ सम्मान
डेढ दशकदेखि दक्षिण कोरियामा नेपाली कला र संस्कृति प्रवद्र्धन आएका गम्भीर श्रेष्ठलाई सियोल महानगरपालिकाले मानार्थ नागरिकबाट सम्मान गरेको छ । बुधबार राजधानी सियोलमा आयोजित विषेश समारोहमा नगरपालिकाका मेयर पार्क वन सुनले श्रेष्ठलाई सम्मान हस्तान्तरण गरे ।
बेलायतमा नर्सको अभाव भएपछि...
नवीन पोखरेल, मंसिर १५, २०७४
लामो समययता नर्सको अभाव भएपछि बेलायतले ५ हजार ५ सय नर्स भित्र्याउने भएको छ । ‘अर्न, लर्न एन्ड रिटर्न’ स्किम अन्तर्गत ल्याउन लागिएका नर्स बढिमा तीन वर्ष काम गरेपछि स्वदेश फर्कनुपर्नेछ । बेलायत आएपछि नर्सहरुले नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) कै अस्पतालमा काम गर्नेछन् ।
हृदयघातबाट निधन भएका प्रकाश र खुशीरामको कोरियामा श्रद्धाञ्जलीसभा
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर ११, २०७४
आकस्मिक हृदयघातका कारण निधन भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पुष्पकमल दाहाल पुत्र प्रकाश दाहाल र जनवादी गायक खुशीराम पाख्रिनको आइतबार श्रद्धाञ्जलीसभा गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियामा अब इच्छामृत्युको अधिकार
दीर्घ र सहन गर्न नसक्ने रोग लागेकाहरुलाई अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले इच्छामृत्युको अधिकार दिएको छ । उक्त राज्यका दुबै संसदबाट यससम्बन्धि विधेयक पारित भएपछि सन २०१९ देखि बिरामीहरुले यो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
कोहली नखेल्दा भारतको हार !
एएफपी, मंसिर २४, २०७४
श्रीलंकाले पहिलो वान डो आइतबार भारतलाई सजिलै सात विकेटले हराएको छ । टेस्ट सिरिज गुमाएयता वान डे सिरिजको पहिलो खेलमा श्रीलंकाले एकपक्षीय जित निकालेको हो । पूरा पढ्नुहोस्
कालिकोटमा ह्विलचियर बास्केटबलको रौनक
कालिकोटमा आयोजित ह्विलचियर बास्केटबलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै काठमाडौं र पोखराका खेलाडी । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर
तुलाराम पाण्डे, मंसिर २४, २०७४
दाहाका ६७ वर्षे विष्णुबहादुर शाही जिल्लामा पहिलोपल्ट आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बास्केटबल खेलेको देखेर अचम्मित भए । उनले सुनाए, ‘मेरा बाबै, अचम्मै पो बनाए ।’ जीवनमा पहिलोपल्ट कालिकोटको मान्मडाँडामा ह्विलचियर बास्केटबल स्पर्धा हेरेका शाहीमात्र होइनन्, ग्रामीण भेगबाट आएका सयौं स्थानीय पनि छक्क परे । पूरा पढ्नुहोस्
टासीलाई कतार ओपन गल्फ
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर २४, २०७४
टासी दोङले चार बर्डी र एक इगलसहित ३८ अंक जोड्दै कतार ओपन गल्फको उपाधि जितेका छन् । गोकर्ण गल्फ क्लबमा शनिबार दुई ह्यान्डीक्यापका दोङले पहिलो होलमा डबल बोगी खेपे पनि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै १२, १४, १७ र १८ औं होलमा बर्डी प्रहार गरे । पूरा पढ्नुहोस्
चर्च ब्वाइज विजयी
चर्च ब्वाइजका जाङ्बु शेर्पाबाट बल खोसर अघि बढ्ने प्रयास गर्दै रमपम झापाका कप्तान नरेन्द्रमणि लिम्बू । तस्बिर : वेदराज पौडेल/कान्तिपुर
चर्च ब्वाइज काठमाडौंले रमपम झापा ११ लाई टाइब्रेकरमा ५–४ ले पराजित गर्दै दोस्रो मनमोहन दुहबी गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनल स्थान सुरक्षित गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
स्यान्टु र नविता च्याम्पियन
पुरुष सिंगलको फाइनलमा दीप साउनविरुद्ध खेल्दै स्यान्टु श्रेष्ठ । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर
राष्ट्रिय च्याम्पियनद्वय स्यान्टु श्रेष्ठ र नविता श्रेष्ठले शनिबार इम्प्याक्ट ठमेल ओपन टेबलटेनिस प्रतियोगिता जितेका छन् । पुरुष र महिला सिंगलमा च्याम्पियन भएका दुवै नेपाल प्रहरीका खेलाडी हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
रियल र भ्यालेन्सिया विजयी
एजेन्सी, मंसिर २४, २०७४
स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत शनिबार लिगका शीर्ष टोली रियल म्याड्रिड र भ्यालेन्सियाले जित दर्ता गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
इन्टर र युभेन्ट्सबीच बराबरी
इटालीको सिरी ए मा शीर्ष स्थान कब्जाका लागि होडमा रहेका इन्टर मिलान र युभेन्ट्सले शनिबार राति गोलरहित बराबरी खेलेका छन् । यस बराबरीमा दुवै खुसी हुन सक्ने छैनन् । पूरा पढ्नुहोस्
टोटनहम ठूलो अन्तरले विजयी
ह्यारी केनको दुई गोल मद्दतले टोटनहमले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा शनिबार राति स्टोक सिटीलाई ५–१ ले हराएको छ । यसअघि खराब लयबाट गुज्रेको टोटनहमलाई यस जितले ठूलो राहत दिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनलगायतको मूल्यमा बुधबार रातिदेखि ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई भाडामा इन्धन शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
रोगले सुन्तला मासिँदै
आश गुरुङ, मंसिर २४, २०७४
बेंसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुरको ठूलो घिमिरे र सानो घिमिरेका किसानको बगैंचामा दशकअघि ४ सय रोपनीमा सुन्तलाका बोट थिए ।
कृष्ण आचार्य, मंसिर २४, २०७४
सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारी खर्चमा परेको चाप र बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनको नाममा सरकारले पहिलो त्रैमासमै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) प्रति उदासीन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा अन्योल देखिएको छ ।
विश्व बैंकको लगानीमा गण्डक नहरअन्तर्गत जिल्लामा झन्डै ३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा सिञ्चित गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अमृता अनमोल, मंसिर २४, २०७४
रूपन्देही धान, गहुँ र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । व्यावसायिक किसान बढ्दै र उन्नत प्रविधि, बीउ तथा उचित मलको प्रयोगले बर्सेनि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष शैक्षिक कर्जा करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो ।
कारोबार रकम ५० प्रतिशत घटयो
यो साता नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकममा करिब साढे ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । साताभर १६ हजार १ सय ६५ कारोबारबाट ३३ लाख ७० हजार ६ सय ८० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भए ।
पराजयपछिको हार्दिकता ! - ०७:२२ AMमोहनविक्रम सिंह पत्नी दुर्गा बनिन् प्यूठानकी पहिलो महिला सांसद् - ०७:०८ AMकञ्चनपुर १ बाट बिना मगर निर्वाचित - ०६:२९ AMनवलपरासीमा वाम र कांग्रेस बराबरी - ०१:५३ AMअशोक राईलाई हराउँदै सुनसरी १ मा एमाले उम्मेदवार विजयी - १२:२५ AMभक्तपुर २ मा एमालेले इतिहास रच्यो - मंसिर २४, २०७४, ०९:५५ PMदेउवाले यसरी जोगाए किल्ला - मंसिर २४, २०७४, ०९:३० PM
कांग्रेसको बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री देउवा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको मतदान हुन ३ दिन मात्रै बाँकी छ । अब चुनिने नेतृत्वले संघीय शासन प्रणालीअनुसार मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउने भएकाले त्यसका लागि प्रमुख दलहरुको अन्तिम रस्साकसी जारी छ ।
दुई तिहाइकै आसपास पुग्छौंः एमाले अध्यक्ष ओलीदाहालसँगको अन्तर्वार्ता : एमालेकै अध्यक्ष अबको प्रधानमन्त्री‘चाडपर्वजस्तो मुडमा हुँदै छ निर्वाचन’‘अब कुनै आन्दोलनमा जान्नँ’
प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष सम्बाहाम्फेलाई हराउँदै एमाले पूर्व अध्यक्ष कन्दङवा विजयी
चन्द्र कार्की, मंसिर २४, २०७४
तेह्रथुम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (ख) बाट वाम गठबन्धनका उमेदवार एमाले पुर्व अध्यक्ष तेजमान कन्दङवा विजयी भएका छन् । वाम गठबन्धनमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका कन्दङवाले १० हजार ३ सय २ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
डोल्पाको समानुपातिक तर्फ पनि एमालेलाई दोब्बर मत प्राप्तघाइते पत्रकार भुसालको निधन सबै सिट वाम अगाडि धादिङमा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेश 'ख' मा माओवादी केन्द्रका जगत सिंखडा विजयी
लाहुरेको कथा ‘मेम साहेब’
दीपक परियार, मंसिर २४, २०७४
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो । अंग्रेज शासित तत्कालीन भारतको एबोटाबादमा थियो बेलायती फौजको क्याम्प । त्यहीं क्याम्पमा गोर्खा सैनिक दम्पतीको कोखबाट एक बालक जन्मिए । पूरा पढ्नुहोस्
२५ सय वर्ष पुरानो प्रज्ञा पारमिता अनुवाद कार्यमा साधनारत आचार्य नोर्बु शेर्पा, लोपेन ङिमा सेङ्गे, टीका शेर्पालगायत । तस्बिर : सुरविन्द्रकुमार पुन/कान्तिपुर
हरेक दिन वरिपरिका गुम्बाहरूबाट प्रार्थनासभाको मधुर संगीत आइरहेको बेला बौद्ध पीपलबोट छेवैको एउटा घरमा भने आचार्य नोर्बु शेर्पा र लोपेन ङिमा सेङगे मगरको समूह प्रज्ञा पारमिताको पहेंला पानाहरू पल्टाइरहेका हुन्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
पन्चुका अनेक स्टाइल
पन्चु जोडिएको लेहेंगा पहिरिँदै अभिनेत्री रूपा राना (माथि), आस्तिक शेरचनको डिजाइन प्रस्तुत गर्दै थाइल्यान्डमा एक मोडेल (बायाँ) र अमेरिकामा अभिनेत्री नन्दिता केसी (दायाँ) ।तस्बिर : फेसबुक
हालै अमेरिकामा सम्पन्न अभिनेता राजबल्लभ कोइरालाको विहेमा अभिनेत्री नन्दिता केसीलाई केही विशेष देखिनु थियो । त्यसका लागि दसैंदेखि नै उनले तयारी गर्दै थिइन् । के लगाउने ? बजारमा आइरहेका ट्रेन्डभन्दा फरक लुक्समा देखिनुपर्छ भन्ने नन्दिताको सोच थियो । पूरा पढ्नुहोस्
बबलिउडलाई बाहिरबाट जति ग्ल्यामरस र चमकधमक देखिन्छ, यहाँ टिकिरहन भने निकै कठिन मानिन्छ । कति चर्चित कलाकारहरू मरेको, गरिबीको कारणले सडकमा माग्दै गरेको खबरहरू बेलाबेला आइरहन्छन् । बलिउड सेलेब्रिटीबारे यस्ता समाचारहरू हल्ला मात्र हुने गरेको प्रमाणित भएको पनि छ । पूरा पढ्नुहोस्
कसैले ‘फिल्मका लागि कथा खोज्दै छु’ भनेको सुन्दा ‘सेतो सूर्य’ निर्देशक दीपक रौनियारलाई अप्ठयारो महसुस हुन्छ । उनलाई यो कुरा चित्तै बुझदैन । भन्छन्, ‘कथा खोजेर फिल्म बनाउने होइन । भएकै कथामा बनाउने हो ।’ उनी त सकेसम्म आफूले भोगेकै कथा फिल्ममा उतार्नु उत्तम मान्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मलाई मन पर्छ शिव परियार, गायक
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर २३, २०७४
पोखरा मन पर्छ । प्याराग्लाइडिङ, तालमा पानी हेर्न र डुंगा खियाउन पाइन्छ । काठमाडौंको ठमेल दिक्क लाग्दो छ, तर पोखराको लेक साइडमा स्ट्रिट वाक गर्न रमाइलो हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
प्रियंका एसियाली महिलामा एक नम्बर
बेलायतको इस्टर्न आई पत्रिकाको सर्वेक्षणले बलिउडकी प्रियंका चोपडालाई एसियाकै सेक्सिएस्ट वुमन घोषित गरेको छ । गतवर्ष दीपिका पादुकोण सर्वेक्षणमा अगाडि थिइन् । यसपटकको समेत गरी प्रियंका पाँचौंपल्ट सेक्सिएस्ट वुमन बन्न सफल भएकी छन् । दीपिका भने यो पाली तेस्रो स्थानमा धकेलिइन् । पूरा पढ्नुहोस्
‘माई लभ’ को मोफसल दौडाहा
दुई वर्षअघि मुलुकमा गएको विनाशकारी भूकम्पको सन्दर्भ जोडेर जापानी निर्देशक तोशिआकी इतोहले बनाएको फिल्म ‘माई लभ : प्रमिस फर काठमान्डू’ को रिलिज डेट नजिकिँदै गर्दा फिल्म युनिट मोफसलको प्रमोसनल दौडाहामा निस्केको छ । टोली राजधानीबाट शुक्रबार पोखरा प्रस्थान गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
मुटु रोग जाडोमा झन् जोखिम
अतुल मिश्र, मंसिर २३, २०७४
तपाईंलाई मुटु रोग छ भने जाडो याममा थप सचेत हुनु अत्यावश्यक छ । चिसोले मुटु रोगीलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्च जोखिम निम्त्याउन सक्छ । चिसोले मुटु र रक्तसञ्चारलाई प्रभावित पार्छ । यो मौसममा शरीरलाई न्यानो राख्न मुटुले झन् बढी परिश्रम गर्नुपर्छ । यसैले गर्दा जाडोयाममा रक्तचापसँगै मुटुको चालसमेत बढ्छ । पूरा पढ्नुहोस्
हातको स्पर्शले पीडा घटाउँछ भारतमा १४ प्रतिशतलाई अस्टियो आर्थराइटिसहोमियोप्याथी औषधी तपाईको चुनावी सह-यात्री बन्न सक्छ रुघाखोकी र घरेलु उपचार
मेघराज सापकोटा, मंसिर १५, २०७४
गाडीमा बसेर पानी पिउँदै बानेश्वर पुग्दा पानी सिकियो । पानीको खाली बोतल बोकेर म मेरो साथीको कोठामा गएँ किनकी मैले बाटोमा मेरो वरिपरि बोतल फ्याँक्ने डस्टवीन भेटिन । साथमा सुन्तलाका बोक्राहरु पनि थिए । मेरो हातमा भएको पोलिथिनको झोलामा पानीको खाली बोतल र सुन्तलाको बोक्रा देखे पछि मित्रले भने, बिदेश बसेको रौनक एक दुई दिन यस्तै हो । पूरा पढ्नुहोस्
कति सुन्नु स्वदेश बस्नेको व्यङ्ग्य ?ओखलढुंगाको एउटा बुथमेडिकल शिक्षामा बाम गठबन्धनको ‘राज्य कब्जा’चुनावी घोषणापत्र पुरा नगरे बेलायतमा राजनीतिक अवसान हुन्छ, नेपालमा नि ?
गुजरात विधानसभा निर्वाचन : भाजपा र कंग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी
(एजेन्सीहरू), मंसिर २४, २०७४
नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो पटक भएको निर्वाचनको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहँदा छिमेकी देश भारतको गुजरात राज्यमा पनि १४ औं प्रदेश (विधान) सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
‘शान्ति प्रक्रिया टर्‍यो’
बीबीसी, मंसिर २४, २०७४
राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हलीले राष्ट्रसंघका कारण इजरायल– प्यालेस्टाइन शान्ति सम्भावना टरेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी दूतावास जेरुसेलममा सार्ने निर्णयपछि बसेको राष्ट्रसंघको आपत्कालीन बैठकमा हलीले अमेरिका मध्यपूर्वको शान्तिप्रक्रियाका लागि इमानदार रहेको दाबी गरिन् । पूरा पढ्नुहोस्
इराकले इस्लामिक स्टेट (आईएस) विरुद्धको आन्दोलन सकिएको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री हैदर अल–अवादीले शनिबार बग्दादमा बोल्दै सरकारी फौजद्वारा इराक–सिरिया सीमाक्षेत्रमा पूर्ण नियन्त्रण कायम भएको जनाए । पूरा पढ्नुहोस्
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा पाँच दिनदेखि फैलिएको डढेलोका कारण कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीले ४ हजार १ सय एकड क्षेत्रमा फैलिएको आगलागीका ५ सयभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । कम्तीमा २ लाख सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
रोयटर्स, मंसिर २४, २०७४
संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिला प्रमुख जेफ्री फेल्टमेनले प्योङयाङ भ्रमणका क्रममा आफूले कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी द्वन्द्व समाधान गर्न इच्छा जनाएको उत्तर कोरियाले जनाएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
ट्रम्पले गरे घोषणा :‘इजरायलको राजधानी जेरुसेलम’
जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयको विरोधमा रमल्लाहमा बिहीबार गरिएको विरोध प्रदर्शन । तस्बिर : रोयटर्स
रोयटर्स/बीबीसी, मंसिर २२, २०७४
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दशकौं लामो अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन गर्दै बिहीबार जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिएका छन् । उनको घोषणासँगै मध्यपूर्वमा जारी शान्ति प्रयास खतरामा परेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
समलिंगी विवाहलाई वैधता
बीबीसी, मंसिर २२, २०७४
संसद्ले विवाहसम्बन्धी ऐतिहासिक कानुन पारित गरेसँगै अस्ट्रेलियामा समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाउने भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
३ नेपाली जेलबाट फरार
एजेन्सी, मंसिर २२, २०७४
हत्या र बलात्कारको आरोपमा भारतीय जेलमा थुनामा रहेका तीन नेपाली फरार भएका छन् । उनीहरू सिम्लाबाट १६ किलोमिटर टाढाको कन्डास्थित मोर्डन सेन्ट्रल जेलबाट बुधबार भागेका हुन् । फरार अभियुक्तमा २२ वर्षीय लीलाधर र प्रेमबहादुर तथा २७ वर्षीय प्रताप सिंह भएको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मानव अधिकारको पक्षमा कविता
६९ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार राजधानीको वसन्तपुर डबलीमा दुई दर्जनभन्दा बढी कविहरू गुन्जिए । पूरा पढ्नुहोस्
पूर्णिमा साहित्य रत्न शाहलाई १३ कविको आरोहणप्रवीणको कुकुरप्रेम नेपाल भाषामा मनराजा
मान्छे जस्तै रोबोट !
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर १५, २०७४
गत महिना एउटा खबर आयो– साउदी अरेबियाले एउटा रोबोटलाई नागरिकता दियो । भलै यो सांकेतिक थियो तर यसले विश्वभर हलचल मच्चायो । रोबोटलाई नागरिकता ? अर्थात् रोबोटलाई मानिससरहको मान्यता ? पूरा पढ्नुहोस्
गुगल लेन्स चाँडैघर या कारको लक खोल्न ‘भाईबराइट’ ‘विच्याट’ ले फेसबुकलाई उछिन्योचुनावकाे मुखमा फेसबुकमा ‘फेक’ धन्दा
बाहिर भोज, भित्र मतदान
जितेन्द्र साह, मंसिर २२, २०७४
‘भोट खसालि सकेँ, भोज खाँदैछु,’ ४४ वर्षीय गोपाल रायले मुस्कुराउँदै भने । विराटनगरको सप्तकोशी विद्यालय मतदान केन्द्र वरिपरि विभिन्न दलको टेन्टमा बिहीबार बिहानदेखि भोजको आयोजना गरिएको थियो ।पूरा पढ्नुहोस्
मर्स्याङ्दीका १३ गाउँमा होमस्टेयात्रा : लेनिन, इवेला र भोड्कासजिलो रुटको अप्ठ्यारो कथामंसिर १९ : सुर हराएको त्यो दिन
चुनाव प्रचारमा ऊँट
मनोज पौडेल, मंसिर १४, २०७४
सानै उमेरमा सबैको आकर्षण बनेका छन् । ११ वर्षका उनको नाम हो शेर मोहम्मद । नाम अनुसारकै काम गरेर भीड जुटाउँछन् । उनै शेरलाई हेर्न अहिले गाउँ गाउँमा भीड लाग्ने गरेको छ । शेर मोहम्मद नामको बडेमाको ऊँट अहिले गाउँगाउँमा प्रचारमा खटिएका छन् । कहिल्यै नदेखेको ऊँट हेर्न गाउँले ओइरिन्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मेक्सिकोमा गरियो ‘मुर्कट्टा परेड’ (तस्बिरहरु)किन मनाइन्छ दिवाली ? मकवानपुरमा बाख्राका लागि ‘स्विमिङपुल’८४ वर्षे उमेरमा पनि कटुवाल
चुनावको उल्लास [फोटोफिचर]
मनोज पौडेल, हरिहरसिंह राठौरमंसिर २४, २०७४
मतगणनास्थल बाहिर फूलमाला र अबिर खरिद गर्नेको उत्तिकै भीड छ । समर्थकहरु डिजे बजाउँदै खुसीयाली साटासाट गरिरहेका छन् । बाटोभरि अबीर र फूलमाला भरिएको छ । बजारभरि चुनावकै चर्चा परिचर्चा छ । पूरा पढ्नुहोस्
यसरी भयो झापामा मतदान [फोटोफिचर]
पर्वत पोर्तेल, मंसिर २१, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि झापाका मतदाता उत्साहित देखिएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत बिहान ७ बजेदेखि मतदानका लागि उनीहरु लामबद्ध भएका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
जितेन्द्र साह, मंसिर २१, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यकालागि बिहीबार भइरहेको मतदानको क्रममा विराटनगर महानगरपालिकामा थरिथरिका दृश्य देखिएको छ । दलहरुले मतदाता एवं कार्यकर्तालाई रिझाउन कतिपय मतदान केन्द्र बाहिर तराई–मधेसको विशेष खाजा च्युरा, चना, चप, प्याजी एवं चियासहितको भोजको आयोजना गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मतगणना स्थलमा तारबार (फोटोफिचर)
मकर श्रेष्ठ, मंसिर २०, २०७४
स्थानीय निर्वाचनको मतगणनाकाट पाठ सिकेर काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणना स्थलमा तारजाली र सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । काठमाडौंको १० निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना पाँच स्थानमा हुँदैछ । भरतपुरमा मतगणना स्थलमै रहेको दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
मतदानका लागि धमाधम तयारी
माधव घिमिरे, मंसिर २०, २०७४
मुलुकभरमै सबैभन्दा बढी मतदाता भएको मोरङमा बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदानका लागि अन्तिम तयारी धमाधम भइरहेको छ । मतदानस्थलहरुबाट मंगलबारैदेखि कर्मचारीहरुले मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिरहेका छन् । मोरङका तीन सयवटा मतदानस्थलबाट बुधबार पनि बिहानैदेखि मतदाता परिचयपत्र लिनेको भीड लागेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
आश गुरुङ, मंसिर १९, २०७४
हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात सुरु भएको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावको प्रचारप्रसारताका माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपात भएकोमा मंगलबार बस्तीमै हिउँ परेको हो । मंगलबार बिहानदेखि परेको हिमपातले स्थानीय जनजीवन प्रभावित बनेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
बम पड्किएपछि भएको भागदौड ।
सुमन बस्नेत, मंसिर १८, २०७४
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका २ स्थित तल्लो भंगालमा कार्यकर्ता साढे १० बजे जम्मा भएर घरदैलो गर्ने कार्यक्रम थियो । सोहीअनुसार तपस्थली बृद्धाश्रममा जम्मा भएर कांग्रेस कार्यकर्ताले घरदैलो सुरु गरे । पूरा पढ्नुहोस्
राप्ती किनारमा एक बिहान
शब्द/तस्बिर : किरण पाण्डे, मंसिर १८, २०७४
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसराको अघिल्तिर बिहान चरा चुरुंगीको सम्मेलनजस्तै थियो । चुनावको चटारोमा रहेको चितवनको यो क्षेत्रमा बिहानको कुहिरो फाट्दै जाादा राप्ति किनारमा चराहरुको पनि कोणसभा भइरहेजस्तो लाग्थ्यो । एकातिर चखेवाले हल्ला गरिरहेका थिए भने अर्कातिर कोइली, बकुल्ला र किंगफिसरहरु जिउ तन्काउादै थिए । पूरा पढ्नुहोस्
हरिहरसिंह राठौर, हरिहरसिंह राठौर,
शब्द/तस्बिर : किरण पाण्डे
राजपा र संघीय फोरमको अग्रता
दुई तिहाइकै आसपास पुग्छौंः एमाले अध्यक्ष ओली
साइलेन्स ब्रेकर !शशी कपुरको ‘ट्याक्सी दौड’राष्ट्रिय जर्सीदेखि लाहुरे बर्दीसम्मजसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न
फेसनको बजारमा हाकुपटासी
युट्युबमा पनि स्टोरिज गुगलको डाटाल्लीफ्रेमबिनाको फोनब्याटल अफ डीजे
दुर्गमको बालमैत्री गाउँ
वनको चरीहुप रोलिङ रेसआच्छु ! घडी